Muuqaalkii maanta iyo Madaxtooyada Muqdisho mudnaan buu lahaa!!!! – Idil News
Muuqaalkii maanta iyo Madaxtooyada Muqdisho mudnaan buu lahaa!!!!
Posted By: Jibril Qoobey February 15, 2017
Xaqiiqdii waa i qiira galisay muuqaalkan,kaligayna mahan ee qof walba oo damiir wadaniyadeed ku jiro waa u hakanayaa gadaal ayuuna u istaagayaa,markuu arko muuqaaladan oo kale.
Laba Madaxweyne oo Soomaliyeed oo midna xilkii ka dhamaaday mid kalana hada la doortay oo si xushmad iyo qadarin,farxad iyo maqaab dawladnimo leh isku salaamaya oo iskugu hanbalyaynaya guusha la gaaray waa waxaan caadi ahayn.
Kaaga sii daranoo waxaa tixgalin gooniya leh dal 26-sano burbur uu ku jiray oo Madaxtooyadiisa ay ilaalinayaan ciidan shisheeye,isla markaana mararka qaar Gudaha madaxtooyadaas ay ka dhacaan weeraro qorshaysan in uu heerkan iyo maqaabkan muujiyo.
Ogow shakhsi walba oo ilaahay abuurtay waxuun ayuu hagaajiyaa si walba oo uu u liito Culusow waxbuu ka tagay,waa qiraynaa taas maanta.
Farmaajo ma taageersani umana arko Masuulkii mudnaa kursigaa markaan qiimeeyo awoodiisa hogaamineed iyo xiliga adag ee dalku ku jiro,balse waxaan leeyahay markale hanbalyo rabi talada haku solan siiyo.
Soomaaliya ilaahay waxaan uga baryayaa in uu kor u qaado Qaranimadeeda maalin maalmaha kamid ahna uu gacanta u galiyo kii si dhab ah umadnaa oo halkii la hiigsanayay wax gaarsiiya.
Muuqaalkan waa mid igu beeray farxad iyo in aan dib uga istaago mucaaradnimadaydii farmaajo saacado kooban oo aan soo gudbiyo guusha Qaranku gaaray iyo halka Somali taalo maanta.
Waxaan rabi ka baryayaa markale Umada Somaliyed meel ay joogto in bogeeda burcad uu isku mariyo oo ay dib u midoobaan.
Kursiga Dalka ugu sareeya waxa gaya Muwaadin walba oo Soomaaliya oo u qalma in uu Umadan hogaamiyo beeshuu rabo haka soo jeedee.
Muqaalkan waa mid fariin cad u ah cadawga Qaranimada Soomaaliyeed,waana muhiim in niyad jabkiisaa lagu farxo.
Caasimadaha soo dhisnaa 50-kii sano ee lasoo dhaafay ee Adis-ababa iyo Nairobi wax badan ma dheera muuqaalka aan ku aragnay maanta madaxtooyada soo kabanaysa ee muqdisho.
Be the first to comment on "Muuqaalkii maanta iyo Madaxtooyada Muqdisho mudnaan buu lahaa!!!!"